Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyey Hindise Sharciyeedka Hanti-dhowrka Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyey Hindise Sharciyeedka Hanti-dhowrka Qaranka
29th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Muqdisho: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay Hindise-sharciyeedka hanti-dhowrka Qaranka oo ka mid ahaa hindisayaasha ay xildhibaannadu ka doodayeen dhowrkii casho ee lasoo dhaafay, iyadoo hidisahan uu maray saddex marxaladood ee aqrinta.
Mudanayaal 12 ah ayaa horay ugu soo gudbiyay baarlamaanka si loosoo af-jaro dooddii maalmahan ay xildhibaannada ka lahaayeen, iyadoo ay xubnaha baarlamaanku isla maanta u codeeyeen sharcigan.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Somalia, Jeylaani Nuur Iikar oo kulanka maanta shir-gudoominayay ayaa ka codsaday xildhibaanada inay u codeeyaan sharcigan, iyadoo codeyntu ay ahayd mid gacan-taag ah.
“Sharcigan waxaa u codeysay 158 mudane oo kulanka goobjoog ka ahaa, waxaa ogolaatay 154-xildhibaan, waxaana diidday afar mudane oo keliya, mana jirin mudane ka aamusay,” ayuu yiri IIkar oo natiijiada codeynta ku dhawaaqay.
Hindise-sharciyeedka oo ah mid uu wixii maanta ka dambeeya ku howl-geli doono hanti-dhowrka guud ee Qaranka, Nuur Jimcaale Faarax ayaa hadal uu ka jeediyay baarlamaanka wuxuu uga mahad-celiyay sida ay sharcigan u ansixiyeen.
Guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay inay weli horyaallaan hindise sharciyeedyo kala duwan oo uu codsaday Jawaari in la ansixiyay ka hor inta aan la gaarin shanta bisha soo socota oo lasoo xiri doono kal-fadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Human Rights Watch oo soo saartay warbixin ku saabsan Xuquuqda Aadana Soomaaliya
Wadada ugu halista badan Muqdisho lagu bilaabay nalalka cadceeda ku shaqeeya